संयमता नगुमाउन नेकपा नेताहरुलाई खतिवडाको यस्तो सुझाव – Himalaya Television
२०७७ कार्तिक ३० गते १३:३१
मित्रहरु, संयम नगुमाउनुहोस।
– हाम्रो पार्टी नेकपाका दुई अध्यक्षहरु वीचको पत्रद्वन्द्व आन्तरिक द्वन्द्वहरुको प्रकटीकरण मात्र हो। यो कुनै नयाँ कुरा होइन ,बरु विभिन्न साना -ठूला सम्बाद, औपचारिक – अनौपचारिक बैठकहरु, अध्यक्ष द्वय एवम सचिवालयका सदस्यहरुबीचका मिलापपूर्ण वार्ता र चर्काचर्की आदि सबैमा उठेका विषयहरु हुन्। आज पक्ष र विपक्षमा बाँडिन बाध्य नेकपाका जिज्ञासु कार्यकर्ताहरु सबैलाई यो कुराको धेरथोर जानकारी छ।
-जब आन्तरिक द्वन्द्वहरुलाई समयमै आधिकारिक ब्यक्तित्वहरुले ब्यबस्थापन गर्ने कुरालाई महत्त्व दिँदैनन, एउटा चरण पार गरेपछि त्यो सार्वजनिक भएरै छोड्छ। द्वन्द्वलाई लुकाउन खोज्नु वा पेलेरै अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने ठान्नु धुवालाई छोपेर राख्नु जस्तै हो। पार्टीमा देखा परेका समस्याहरुलाई समयमै समाधान गर्न खोजेको भए यो धुवा ले आजको कालो बादल बनाउदैनथ्यो, मेघ गर्जन हुँदैनथ्यो ।पार्टीका नेता – कार्यकर्ता र शुभेच्छुकहरुको मन रुदैनथ्यो र सरकार पनि दिक्दारी र ग्लानीको विषय बन्दैनथ्यो।
३. हिजो देखि सामजिक संजालहरुमा क प्रचण्डलाई निन्दा गर्नेहरु, चुनौती दिनेहरु र माफी माग्न दबाब दिनेहरुको लाइन लागेको देखेको छु।प्रतिवादको श्वर पनि आउन थालेको छ। यो लाइनमा सचिवालय सदस्य र स्थायी कमिटीका सदस्यहरु पनि उभिएको देखेर छक्क परेको छु।म मन्द बुद्धिको मानिस तपाइहरुको “तीक्ष्ण बुद्धि” का अगाडि नतमस्तक भए। किन यसो गर्नु हुन्छ? आफ्नो कमिटीको सर्बसम्मत निर्णय लागू गर्न नसक्नेहरुको सिँगौरी किन? तपाइहरुलाई पार्टी निर्णय हरुको पालना नगर्ने र गर्न नदिनेलाई औला ठड्याउन नसक्ने हुतिहारा र लम्पसारवादीहरुको बिभुषण प्राप्त गर्न प्रतिस्पर्धा नगरौ। यो पार्टीमा न प्रचण्डलाई लखेटेर सिध्याउन सक्नुहुन्छ न र एक्ल्याउन। न त यहाँहरुलाई कसले सिध्याउन सक्छ। वरिष्ठ नेता माधव नेपालले बिगत लामो समयदेखि पार्टीमा राख्नु भएका असहमती र सुझावहरुलाई समयमा सम्बोधन गरेको भए आजको यो अबस्था आउने नै थिएन ।
उहाँले राख्नु भएका प्रस्तावहरुलाई जति धेरै नजर अन्दाज गर्दै जानू भयो र उहाँ र उहाँको मतलाई राम्रो ठान्नेहरुको खिल्ली उडाउन थाल्नु भो, त्यति नै रोगमा जटिलता बढदै गयो ।आज क माधव कै एजेण्डामा नेकपाको राजनीतिले परिक्रमा गरिरहेको छ, हैन र ?? ओ दुई प्रवृत्तिको वीचको संघर्षको रुपमा आज विकसित भएको छ। के यो पार्टीमा माधव नेपाल र झलनाथहरुलाई समाप्त पार्न सक्नुहुन्छ?? आखिर मिल्नु नै छ भने विचारसम्मत र न्यायसङ्गत सम्झौता नै सर्बोत्तम विकल्प हो। त्यो दिशामा जान नचाहनेको पक्षमा उभिएर बोल्नुले तपाईंहरुको ब्यक्तित्वलाई पनि फिका फिका बनाइरहेको छ।
५.न केपि ओलीले प्रधानमन्त्री पद छोडदा देश बर्बाद हुन्छ,न अर्को कोहि आएर देश एकाएक झलमल्ल हुन्छ। विकास एक लामो प्रक्रिया हो, जसको प्रस्थान बिन्दुबाटै त्यस्को भविष्यको रुपरेखा कोरिन थाल्छ। आज बाटो पक्रेन र जनताको विश्वास जित्न सकिएन, चिन्ता यहि नै हो।जनताको न्युनतम सन्तुष्टिको लागि दत्तचित्त भएर लागेमा जनताले माया गर्छ्न, विश्वास गर्छन। यसको लागि पार्टी र सरकार नीति निर्माण र कार्यान्वयनम सृजनात्मक र एकाकार भएर लाग्नु पर्दछ। यहि भएन र दिक्दारी बढ्दैछ। यो काम केपि ओलीले नै गरे हुन्थ्यो भनेर प्रधानमन्त्री चयन गरेको; ।सक्नु भएन । समीक्षा गरौ न । न पार्टी मिलाउन सक्नु भो न सरकार राम्रो सङ्ग चलाउन सकेको देखियो।
पार्टी नमिले सरकार राम्रो सङ्ग चल्न सक्दैन भन्ने सन्सारकै धेरै दृष्टान्त दिन सकिन्छ। सकेसम्म उहाले नै चलाउनु उत्तम । सक्नु हुन्न भन्ने सल्लाहले नै देश र कम्युनिस्ट आन्दोलनको भलाइको लागि प्रधानमन्त्री पद त्याग गर्नुभए गौरवको विषय हुनेथियो ।पार्टी भित्र पनि यहि नियम लागू हुन्छ। सकेको र न्सकेको उहाँलाई सोधेर हैन, डरले कापेर हैन समग्र विश्लेषणका आधारमा गरौ। निर्बैयक्तिक बनौ । पार्टी पनि अस्तब्यस्त , सरकार पनि अस्तब्यस्त तर केही मित्रहरु तै पनि जयगान मा नै मस्त । कुनै जनादेश को बहानावाजीमा वा सदाकाल लाभ लिने र सत्तारोहण गरिरहने केही पात्रहरुको अगस्ती- स्वप्नाहरुको रक्षालागि हामी कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई नै ब्यक्तिको साथमा सति पठाउने महाभूल नगरौ ।
सबै तनावलाई घृणाले हैन प्रेमले शून्यमा झार्न सकिन्छ।स्वार्थले हैन सिद्धान्तनिष्ट आदर्श र त्यागले मात्र लामो समयसम्म मित्रताको अङ्गालोमा बाध्न सकिन्छ। अरुलाई जित्न सक्नुहोला , राम्रो कुरा हो तर आफू हार्न तयार नहुने विजयले अन्तत तानासाहको जन्म दिन्छ। खतिवडाको फेसबुक स्ट्याटसबाट
खतिवडा नेकपा संयमता